AIR SPRING DZAKATEVEDZANA
AIR Suspension DZAKATEVEDZANA
Welcome kuti chitoro yedu!
S henzhen TFD Industrial Co., Ltd. ari mukugadzira kambani, kushandisa kukura & pakutsvakurudza uye yokutengesa basa Air mhepo vibration kudzora zvigadzirwa. The zvigadzirwa uyewo michina yemhando yepamusoro vari munzvimbo yakakura kushandiswa yezvokutengeserana, mutakurwi mota uye maindasitiri minda.
ONE MIRA revatema SERVICE
Tinosimbisa kuwedzera kukosha kuti mutengi Ukuwo.
Tinotenda kuti unhu uhwu zvose. Ndicho chimwe chete chinonyanya kukosha chokufunga pazvisarudzo zvose zvatinoita, kubva chii manyuko isu vatenge, kuti sei isu mukavakumikidza iwe.
PERILLE ON-nguva VAKAWANDA!
On-nguva hurukuro nguva dzose kukoshesa kwedu side.We basa pamwe yakawanda nyanzvi logistic vamiririri, uye netsvimbo dzedu 24-maawa takatarisa vanoita.
We zvinopa yakanakisisa hwokugadzira rutsigiro uye zvigadzirwa edu vakapfuura kuzviomesera rwokugadzira kuongorora.